Askar US oo ay Daacish u hanjabtay. - Wargeyska Faafiye
Askar US oo ay Daacish u hanjabtay.
Milateriga Maraykanka ayaa sheegay in ay si shaqsi shaqsi ah u wargelinayaan ilaa boqol askari oo rag iyo dumar isugu jira in la bartilmaameedsan doono, kuwaas oo magacyadooda lagu shaaciyey bar internet oo lala xiriirinayo Daacish.
Koox aan hore loo aqoon oo la yiraahdo Qaybta Dhaca Internetka ee Dawladda Iislaamiga ayaa dadka taageera ka dalbatay inay dilaan dad liis ku qoran oo ay ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen weerarrada cirka ee dhanka ka ah Daacish ee Ciraaq iyo Suuriya. Magacyadooda, masawirradooda iyo cinwaannadooda ayaa la soo geliyey internetka.
Hay’adda dambi baarista ee ciidanka badda ee Maraykanka ayaa sheegtay in hanjabaaddaas loo jeediyey askarta Ameerikaanka aan la xaqiijin. Waxay sheegtay in milateriga lagula taliyey inay iska hubiyaan inta ay le’eg tahat xogta ku saabsan shaqsi ahaantooda ee Internetka laga heli karo.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsGunfire erupts in Paris as police hunt fugitives.Ganacsigii Afgooye oo amni darro u istaagay.Cabdalla Yuusuf Hanuuniye oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay Magaalada MuqdishoMalala oo la siiyey Nobel Peace PrizeAhlu Sunna iyo dowladda: Isfaham darro.